MSF waxa ay xireysaa mashruuceedii caafimaad ee Boosaaso - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
MSF waxa ay xireysaa mashruuceedii caafimaad ee Boosaaso
07.05.2008 | Gobolka Mudug, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya, War-Saxaafadeed
Nayroobi - Iyada oo laga ambaqaadayo afduubkii loo geystey laba ka mid ah shaqaalaheena bani’aadamnimada Disembartii hore, waxaa 15kii bishii Abriil Ururka Caalamiga ah ee Caafimaadka ee Médecins Sans Frontières (MSF) uu go’aansadey in uu xiro dhammaan hawlihiisii caafimaad iyo kuwii quudinneed ee uu u hayey dadka gudaha ku barakacay ee ku nool daafaha magaalada Boosaaso.
Islamarkii uu dhammaadey afduubka, MSF waxa ay go’aansatey in ay laasho joogitaankii dhammaan shaqaalaheeda caalamiga ahi ay joogeen Boosaaso, muddadaa wixii ka dambeeyey waxaa ay ku tiirsaneyd shaqaalaheeda Soomaalida ah in ay sii wadaan hawlaha caafimaadka iyo kuwa quudinta.
Daacadnimadoodii sarreysay iyo dadaalkoodii buuxey ayaa saldhig u ahaa sii socoshada gargaarka quudinta ee la siinayey carruurtii nafaqo-darrada haysay ee ku noolaa xerooyinka dadka soo barakacay.
“Laakiin xaaladda nabadgelyada oo aan gaarsiisneyn heer la aqbali karo ayaa ururka ku khasabtey in uu xiro mashruuca,” ayuu yiri Dr. Roger Teck, oo ah Madaxa Hawl-gallada ee MSF.
Hase ahaatee, MSF waxa ay jeclaan lahayd in ay tilmaanto xaaladda caafimaad ee ka sii dareysa ee haysata dadka gudaha ku barakacay ee ku nool daafaha magaalada Boosaaso kuwaas oo ku jira xaalad aad u cakiran. Haweenka iyo carruurta ayaa si aad ah ay u saameeyeen masiibooyinka bani’aadamnimada ee dabadheeraadey kuwaas oo u keeney silic iyo nafaqoxumo, cudur iyo halis dheeraad ah oo ugu jiraan geeri.
Bishii Disembar 2007, sahan quudineed oo ay sameysey MSF waxaa uu tusayey heer nafaqoxumo ba’an oo aad u baahsan (27.2%), taas oo 9.4% ay tahay nafaqoxumo aad u ba’an. Dhammaan tirooyinkan waa kuwo ka sarreeya heerka xaaladda degdegga ah. Toddobadii bilood ee mashruucu socdey, MSF waxa ay barnaamijkeeda quudinta ku daweysey 1,957 carruur nafaqoxumo ba’an hayso ah, carruurtaas oo 516 ka mid ahi la seexiyey qaybta bukaan-jiifka ee cunto ku daweynta iyo daryeelka.
MSF waxa ay si joogto ah uga shaqeyneysaa Soomaaliya in ka badan 16 sanno, haatanna waxa ay daryeel caafimaad siineysaa 10 gobol oo ka mid ah dalka. Sannadkii 2007, waxaa la furey dhowr mashruuc oo wax looga qabanayey dhibaatooyinkii caafimaad iyo kuwii bani’aadamnimo ee uu keeney dagaalka socda. Sanadkaas gudihiisa kooxaha caafimaadku waxa ay sameeyeen in ka badan 2,500 oo qalliin ah, 520,000 oo daaweyn bukaan-socod ah, waxaana ay cusbitaallada seexiyeen qiyaastii 23,000 oo bukaan-jiif ah.